Mitady Kamiao Tafondron-drano Roa Hovidiana Ny Polisy Kambojiana Hanoherana Fihetsiketsehana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Oktobra 2014 18:19 GMT
Namoaka fakana tolo-bidy misokatra hoan'ny rehetra ny polisy Kambojiana hividianana kamiao roa mpitondra tafondron-drano izay nambaran'izy ireo mazava tsara fa “hampiasaina hamoretana fihetsiketsehana.”
Nanaitra ireo mpikatroka ny zon'olombelona ilay filazana, nivoaka tamin'ny gazety roa ao an-toerana, ka miahiahy izy ireo fa mety hampiasa herisetra indray ny manampahefana satria namelona indray ny fitakian'izy ireo hampakatra ny karama farany ambany indrindra isam-bolana ireo mpiasan'ny fanaovana akanjo.
Nanatontosa fitokonana manerana ny firenena ireo mpiasan'ny fanaovana akanjo tamin'ny volana Janoary, izay naparitaky ny polisy tamin'ny fomba feno herisetra. Noravan'ny manampahefana ihany koa ny toby fihetsiketsehan'ny mpanohitra ara-politika ao amin'ny Kianjan'ny Fahalalahana ao Phnom Penh. Volana maromaro izay, nandrara ny fihetsiketseham-bahoaka ny governemanta mba hihazonana ny filaminana sy ny firindrana ao amin'ny firenena.
Tao amin'ny Facebook, John Weeks, tompon'andraikitry ny seraseran'ny fikambanana hoan'ny fampandrosoana Soedoà Forum Syd ao Kamboja nanontany ny laharam-pahamehan'ny governemanta ihany koa: